Rag hubaysan oo Weerar ku qaaday xarunta Militariga ee Kabul – Radio Muqdisho
Iska horimaadkan ayaa u dhaxeeyay booliska iyo kuwa rag hubaysan, iska horimaadkan ayaa socday mudo sacado ah kuwaaso weeraray xarun tababar milatariga ee ku taal caasimadda Kabul ee dalka afganistaan.
Wasaarada arimaha gudaha ayaa xaqiijisay weerarkii Isniintii in lagu qaaday xarunta milatariga ee magaalada caasimadda ee Kabul .
Weeraryahannadu waxaa ay ku dhumaaleysanayeen dhismaha xarunta oo ay ku bartilmaameedsanayaan askarta halkaasi tabaabarku uga socday.
Hay’adda Qaranka ee Amniga Dalka Afganistaan ​​ayaa uu sheegay wargeyska TOLO news in waraarkan uu yahay mid logu talaa galay in lagu waxyeeleyo xarunta milatariga ee Kabul .
Wararka ayaa sheegay in ugu yaraan shan qof ay weerar ku qaadeen xaruntasilama ogaa ilaa hada khasaaraha dhimaasho ama dhawaac ee ka soo garay ciidaamadi ku sugnaa xeraadaweeraarka lagu qaaday .
Weerarkan ayaa qayb ka aah weeraarada intaa badan ka dhacaa Dalka Afganistaan
Wasiirka Beeraha DFS oo Muqdisho ka furay shir looga hadlayo sharciga Beeraha